Ukuphucula i-Google Rankings nge-Twitter ngokulandela i-Tips Semalt
I-Twitter yenye yemithombo ephambili xa ifika ekukhuthazeni iwebhusayithi yakho kwi-intanethi. Abantu abahlukahlukeneyo basebenzisa nje le ndawo yezokuhlalisana kwi-intanethi kwaye bangazi ukuba kubaluleke kangakanani. Iakhawunti yakho ye-Twitter inokufumana i-website yakho eninzi yendlela yokujonga kunye nekhwalithi, ngoko ke kufuneka udibanise kunye nabazalwana abachaphazelekayo kunye nabalingane bezoshishino ngokukhawuleza. Nik Chaykovskiy, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko kuMphathi weNtengiso, uthi kubalulekile ukwabelana ngokubambisana kunye nomxholo kwiakhawunti yakho ye-Twitter - babboe curve e. Ngexesha elifanayo, kufuneka ubhale amanqaku amaninzi kwiwebhusayithi yakho kwaye uqale iingxoxo, uphendule kwimibandela nemibandela, uthethe abathengi bakho malunga nomkhwa wakho, kwaye uxoxe nabangani kwi-Twitter ukuze wandise inethiwekhi yakho.
Kukhuselekile ukutsho ukuba i-Twitter yenye yezona ndawo ziza kumajelo eendaba ezentlalo xa zifika ekukhuthazweni kweentengiso. Ingxoxo rhoqo kwiimidiya zentlalo zinyanzelekile njengoko le nkundla yentlalo isebenza kuphela xa uyayisebenzisa kwimimandla yabantu kungekhona imiba yabantu. Ngaphezulu, i-Twitter inokukunceda kuphela xa ubhala i-tweet kunye ne-retweet ngegama lakho, uxoxisane nabanye, kwaye ulandelwe ngabantu abafanelekileyo.
Sebenzisa izixhobo ze-Twitter zokuKhuthazwa kweMpawu
Akukho migaqo ethembekileyo kwaye ungavumi ukulandela izixhobo, kodwa ungasebenzisa i-Twitter ngesandla ukubandakanya abantu abaninzi nangaphezulu. Ezinye zezixhobo, nangona kunjalo, unokuthembela kuzo ii-Twtpoll kunye ne-Paywithatweet. Asinakukungaziboni ukuba abaninzi abantu basebenzisa ezi zixhobo kunye neenkqubo ezifanayo ukunyusa ukubaluleka kubalandeli babo..Unokuphinda ukhulise isiseko sakho se-Google usebenzisa izixhobo ezisekelwe kwi-Twitter okanye into efanayo.
Qhagamshelana nabantu kwizinye iiSayithi zeMidiya zeNtlalo
Enye indlela yokufumana abalandeli abaninzi be-Twitter ngokuxhuma nabantu kwiiwebhusayithi zeevenkile zentlalo kwaye ubacela ukuba bakulandele kwi-Twitter. Ndithembele kum, yenye yeendlela ezilula kwaye zintle kakhulu zokuthintana nabantu abaninzi. Kufuneka uxoxe ngezinto ezahlukeneyo kunye nabo kwaye ubacele ukuba babelane ngeengcinga zabo nawe kwi-LinkedIn, i-Foursquare, FriendFeed, i-Facebook ne-Quora. Ukwenza njalo unokuqiniseka ngokufumana abalandeli abaninzi be-Twitter, kwaye yindlela elula yokwenza abantu banwabile kwaye bakhuthaze i-brand yakho kwi-intanethi. Xa i-brand yakho iphuhlisiwe ngokupheleleyo, indawo yakho izakufumana ngokuzenzekelayo iimpawu ezininzi kunye nokuphuculwa kwendawo kwiGoogle.
Ukuqhubisana ne-Twitter Ukuncintisana
Kumele usebenze ukhuphiswano lwe-Twitter ukufumana abantu ababandakanyekayo. Tweet rhoqo kwaye usebenze inani lemibuzo ukuze abantu abaninzi baninzi baxakeke. Yenza umzamo we-SEO ukuba unokuphucula indawo yakho kwindawo ekuhlaleni kwimidiya yoluntu kunye nenjini yokukhangela iziphumo. Akufanele uzive uyanqikaza ekuchitheni imali kuyo. Kucacile, yindlela yamashishini kwaye ingafuna imali yakho, ixesha kunye nemizamo. Ukuthatha kwi-akhawunti ukuba iziphumo neziphumo zihlala zikhulu, kufuneka uqalise ukhuphiswano lwe-Twitter ngokukhawuleza. Konke oku kuya kuqinisekisa ukuba isayithi lakho libhetele bhetele ngeGoogle kwaye unako ukufumana abaninzi abathengi abanokuthi banomdla kwiimveliso kunye neenkonzo.